/blog/gallery/DECA ntụ ntụ-Nduzi Ntuzi Olee otú Mee Nandrolone Decanoate (Durabolin)
Ihe na 05 / 30 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Gịnị bụ Nandrolone Decanoate(DECA)
Taa, ọtụtụ ndị na-ahụ maka ozu na-ahọrọ ka ndị na-agwọ ọrịa na-edozi ahụ na-eme ka ha nwee ike ịmalite ikpo ọkụ. Nandrolone Decanoate, nke a maara dị ka DECA, nke a na-ere n'okpuru aha aha ya bụ DECA-Durabolin, bụ otu n'ime steroid siri ike nke na-enye nsonaazụ dị egwu mgbe ejiri n'ụlọ obibi. Ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịnọ na-eche ihe Deca Durabolin bụ na ihe ọ ga-emere gị. Lee ụfọdụ atụmatụ Nandrolone Decanoate (DECA) nke mere ka ya na ndị ọzọ dị iche iche.
Nandrolone Decanoate (DECA) bụ onye na-arụ ọrụ steroid, ọ na-emekwa ka ọ dịkwuo mma. Kedu uru nke iji steroid dị nwayọọ? N'ime ogologo ndụ, ogologo oge ọ ga-ewe maka steroid ịhapụ ahụ. Nakwa, nke a pụtara na Nandrolone Decanoate dosage agaghị abụkarị. Naanị ị ga - enweta ọgwụ ahụ mgbe izu atọ gasịrị, n'adịghị ka ndị ọzọ na ị ga - achọ iji nweta jab kwa izu.
Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) enwekwara mmetụta ole na ole, na-eme ka ọ bụrụ ndị hụrụ n'anya na-elekọta ahụ ike ha. Mmetụta ndị na-adịghị njọ dị na ya bụ n'ihi na ọ na-esikarịghị na-atụgharị na estrogen.
Mmetụta nke Nandrolone Decanoate na bodybuilding
- Mee ka ahụike zuru ike
-Bịbaa oke ahụ ike ahụ
-Ime ihe ngosi
Mee ka mgbake dị mma
Ọ gara ụlọ mgbatị ahụ ma ghara ịmalite ịrụ ọrụ ọ bụla n'ihi ike ọgwụgwụ kemgbe ọrụ ikpeazụ gị? Mgbe eji Nandrolone Decanoate mee ihe, ị ga-achọpụta na ị nwere ike ịghachite site na mmega ahụ gara aga ma nwee ike ịrụ ọbụna karị n'oge ọzọ.
Enweghi ihe mgbu na nkwonkwo nke Nandrolone Decanoate ebe ọ na-eme ka ha jide n'aka na ha na-adị mma mgbe nile.
Mee ka ike dịkwuo
Enweghị ike, ihe mgbaru ọsọ gị nwere ike ịghọ ihe efu. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịnweta ike, ị nwere ike ibuli nnukwu ihe dị elu site n'ịmụtakwu ahụ ike. Nandrolone Decanoate ntụ ntụ eme ka ike gị dịkwuo ukwuu, na-enye gị ohere imeri ihe dị elu na ike kacha elu.
Gbanwee oke akwara ahụ
Nandrolone Decanoate nwere ike dị iche iche na-ewu ụlọ, ihe dị mma bụ na ọ na-agbakwunye na ahụ ike uka.
Ị kwesịrị ime ka mgbatị gị pụta ìhè? Iji Nandrolone Decanoate ga-enyere gị aka ime ka mgbatị gị na-arụpụta ihe, na-eme ka ị nweta ahụ ị na-achọsi ike n'oge kachasị dị mkpirikpi.
Otu esi eme Nandrolone Decanoate (DECA)
Nzọụkwụ 1: Jiri Nandrolone Decanoate ntụ ntụ mee ihe n'ime beaker.
Nzọụkwụ 2: Tinye BA na BB.
Nzọụkwụ 3: Ihe nkwụsị ahụ na-amalite igbatu na ntụ. Mee ka ngwakọta ahụ dị nwayọọ iji mee ka usoro ahụ dị ngwa.
Nzọụkwụ 4: Tinye mmanụ Sesame ka ọ bụrụ ihe ngwọta ma kpalie ya nke ọma.
Nzọụkwụ 5: Nweta ihe ngwọta ọkụ n'ime sirinji nke a ga-eji nyocha ma tinye nịịlị n'ime nsị sirinji.
Nzọụkwụ 6: Kanye akpa ahụ
Chemicals ịkwesịrị ịkwadebe ya
Nandrolone Ntughari Ntube maka DECA 50ml ọ bụla na 200mg / ml
10grams Nandrolone Decanoate ntụ ntụ
32.50ML sesame mmanụ (Zere mmanụ dị arọ na ndị ị nwere ike ịbụ nfụkasị).
2.5 Benzyl alcohol 5% (Agafela 5% BA maka mgbanwe ọ bụla ị na-eme)
Ụdị vials nke mbụ
Akwụsị na-agwọ ọrịa
.22 micron syringe nzacha
Ngaji ka nwuo
Nzọụkwụ site nzọụkwụ na ntụziaka na-esi ime biya Nandrolone Decanoate
Kwụpụ 1: Gwa Nandrolone Decanoate ntụ ntụ n'ime beaker.
A na-eme nke a site n'iwe otu akwụkwọ, tinye ya na ọnụ ọgụgụ na ịpịkọta ya ka ọ ghara ịdị na-etinye akwụkwọ dị arọ ma ọ bụrụ na ị nyochaa uzuzu gị. Tinye ntụ ntụ gị site na bit ka ị ghara ịchọrọ mgbe ị gafechara ezigbo ntụ ntụ. Iji jide n'aka na ị bụ onye ziri ezi, nweta ọnụ ọgụgụ nke zuru ezu na gram. Ozugbo i nwetara gram iri, ị dị mma ugbu a.
Kwụpụ 2: Tinye BA na BB.
Kwụpụ 3: Ihe mgbaze ahụ na-amalite igbatu na ntụ. Mee ka ngwakọta ahụ dị nwayọọ iji mee ka usoro ahụ dị ngwa.
Ị nwere ike ịhọrọ ikpo ọkụ na ngwọta site na iji mmiri bat mee ka ọ bụrụ ngwa ngwa. Kedu ka ị si eme nke ahụ? Were mmiri na ite na-etinye ya na stovu maka ikpo ọkụ. Nweta beaker nke nwere ihe ngwọta ma tinye ya na centimeters n'ime mmiri. Ị nwekwara ike iji mmiri ọkụ si na kettle. Zere mmiri na-ekpo ọkụ n'ihi na ọ ga-eduga n'ịgwọ ọrịa na-egbochi usoro ahụ.
Kwụpụ 4: Tinye mmanụ Sesame na ihe ngwọta ma kpalie ya nke ọma.
Okpokoro Sesame kwesịrị inwe otu okpomọkụ ahụ dịka nke ihe ngwọta iji kwe ka ihe ngwọta ahụ na-agba ọsọ n'ụzọ ziri ezi. Lelee maka ọkpụkpụ ọ bụla nke nwere ike ịmalite ma hụ na ọ dịghị ihe ọ bụla tupu ịkwaga usoro nhazi.
Kwụpụ 5: Debe ihe ngwọta ahụ n'ime sirinji nke a ga-eji nyocha ma tinye ihe agịga n'ime nnu sirinji.
Jiri nrụgide na sirinji mee ka ihe ngwọta na-agba ma dochie nza na ọhụrụ mgbe ị hụrụ na usoro ahụ na-eme ngwa ngwa.
Kwụpụ 6: Kpuchie akpa ahụ
Ozugbo emere gị usoro nhazi, ihe ngwọta dị njikere maka ojiji. Mechie akpa ahụ iji zere mmetọ.
Mgbe a bịara n'ịdọrọ ndị steroid, e nwere mmadụ abụọ; ndị na-azụta Nandrolone Decanoate maka ire ere na ndị na-ahọrọ ụlọ na-akwapụta ya na Nandrolone Decanoate. Na iji ma, enwere otu ihe mgbaru ọsọ; iji mepụta ahụ ka mma.
Ọ bụrụ na ịnwere ike ịchọta ụlọ nke steroid onwe gị, mgbe ahụ, ị ​​ga-agbalịrị ime ya n'ụzọ ziri ezi. Site na ịgbaso Ntụziaka Nanasrolone Decanoate nyere esi mee Deca, o yikarịrị ka ị ga-enweta nsonaazụ zuru oke. Ịgafe ma ọ bụ jiri obere ihe ma ọ bụ ihe mgbaze ma ọ bụ Nandrolone Decanoate ntụ ntụ nwere ike imetụta àgwà nke steroid gị.
Na eziokwu, na ngwa ngwa na ihe ndị dị na nri, ị nwere ike ịchọta Nandrolone Decanoate nke ọma ma chọpụta ahụ gị.
Nandrolone Decanoate, GJ Blokdijk, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018, 1-170 peeji nke
Anabolic Steroid and the Athlete- 2d ed, William N. Taylor. MD, peeji nke 39
Ọgwụ ọjọọ, ndị na-agba ọsọ, na ịrụ ọrụ ahụ, nke John A. Thomas bipụtara, peeji nke 27-30
7 Best Nootropics (Smart Drugs) na ahịa nke 2018
Otu esi eji Trenbololone Ntụziaka na-ejikọ Trenbolone Enanthate Powder 2019	Ihe 10 kachasị mma Anabolic Steroids Material Raws